15% Discount For Main Dishes အသေးစိတ်
စားပြီးတိုင်း ထပ်စားချင်နေမယ့် Homemade Ramen နဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ Ramen Monster
B&F Clubcard ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူတွေအတွက် Ramen Monster က Main Dishes တွေကို (15) % Off ပရိုမိုးရှင်းရှိနေပြန်ပြီတဲ့….
Ramen Monster ကတော့ စားပြီးရင် ထပ်ထပ်စားချင်နေစေမယ့် အရသာမျိုး… တစ်ပွဲဆိုလည်း အများကြီးပါတာမို့လို့ ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့ တော်တော်လေးတန်တယ်…
အခုဆိုရင် နိုင်ငံတော်တော်များများက အစားအသောက်တွေကို ရန်ကုန်မှာ စုံစုံလင်လင် ရနေပါပြီ… အစားအသောက်တွေအများကြီးထဲကမှ ဂျပန်အစားအသောက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ramen Menu အစားအသာက်များကို မြည်းစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Ramen Monster ကိုညွှန်းပေးပါရစေ…
Ramen Monster က Ramen Menu တွေက သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးတော့ Homemade လက်ရာ ခေါက်ဆွဲသားကိုသာ အသုံးပြုထားတာဖြစ်လို့ တခြားခေါက်ဆွဲအရသာတွေနဲ့မတူပဲ စားရတာ လေးလေးနက်နက်နဲ့ အရသာပိုရှိစေပါတယ်…. Soup ကလည်း သေချာသန့်စင်ထားတဲ့ တကယ့်အရိုးပြုတ်ရည်ကိုသုံးထားသလို ပါဝင်တဲ့ အသားကလည်း နူးအိနေတာပဲ…
ချုံပြောရရင် ပေးရတဲ့ တန်ကြေးထက် ပိုတန်တဲ့ ပွဲအရွယ်အစားရယ် ၊ အရသာကောင်းမွန်မှုရယ် Ramen Menu အမျိုးအစားစုံလင်တာကြောင့် အစားကောင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေစားကြည့်သင့်ပါတယ်…
B&F Clubcard နဲ့ဆိုရင်လည်း Ramen Monster မှာ Main Dishes များအတွက် (15) % Off ပရိုမိုးရှင်းကလည်း ရှိပါသေးတယ်…. ပရိုးရှင်းကိုတော့ ငွေမရှင်းမီလေးမှာ B&F Clubcard ကိုပြပေးလိုက်ရုံပါပဲ…
ပရိုမိုးရှင်းကိုတော့ Ramen Monster ရဲ့ ဆိုင်ခွဲများဖြစ်တဲ့ Hledan Center , Junction Mawtin နဲ့ Nawaday ဆိုင် များတွင် ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်…
Ramen Monster Address
(1) Hlendan Center Basement 1 ( 5/6)
(2) Junction Mawtin (Ground Floor)
(3) No(30), Nawaday St , Yaw Min Gyi Quarter, Dagon Township
တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ B&F Clubcard ကို နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 09 895711240 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်….
Promotion Period - 08.June.2020 to 08.Sep.2020